Sazi kangakanani ngama-pesticides?
Ukukhiqizwa kokudla okuvamile e-United States kufaka izinambuzane ezahlukahlukene. Abalimi babheke kumakhemikhali okwenziwa ngamakhemikhali, izinambuzane, ama-fungicides kanye nomanyolo ukwengeza isivuno sezitshalo. Lezi zicelo zamakhemikhali zivelise izinkinga ezingamashumi eminyaka zemvelo, futhi ziyavunywa ukuthi zinobungozi nakwezempilo yabantu. Kepha iqiniso lokuthi anobungozi kanjani la makhemikhali; nokuthi yimaphi amazinga okubekezelelana abantu abangamelana nawo ngokuphepha ekudalweni kokudla, kwamanzi nomoya kuvame ukuba nzima ukuthola. Abalawuli bathembele kakhulu ezifundweni zesayensi ezixhaswe futhi ziqondiswe izinkampani zezolimo ezithengisa amakhemikhali ukwahlulela ukuphepha kwazo, futhi imali namathuba okuhlaziya okuzimele kunqunyelwe.
NgoMashi 2015, omunye wemithi yokubulala ukhula esetshenziswa kakhulu emhlabeni, ebizwa nge-glyphosate, yahlukaniswa yi-World Health Organisation ngokuthi “mhlawumbe i-carcinogenic kubantu. ” Eminye imishanguzo yokubulala izinambuzane esetshenziswayo, kufaka phakathi i-chlorpyrifos ne-2,4-D, ibeka izingozi ezaziwayo kubantu nasemvelweni. I-US Environmental Protection Agency igqugquzela ukunwetshwa kwezinhlobo ezintsha zezibulala-zinambuzane ezisuselwa ezingxenyeni zemvelo kunamakhemikhali okwenziwa, okuthiwa ama-biopesticides. Lokhu ngokuvamile kubhekwa njengokulondolozwa kwemvelo kakhulu. Kepha ukusetshenziswa okubanzi kwezibulala-zinambuzane zamakhemikhali kuyaqhubeka, kukhiqiza izigidigidi zamaRandi ekuthengiseni izinkampani zezolimo.
Amaphepha eMonsanto - Izimfihlo Eziyingozi, iCor ...
Izinsizakusebenza Eziyinhloko Kwimithi yokubulala izinambuzane
I-Roundup / iGlyphosate
IGlyphosate: Ukukhathazeka Kwezempilo mayelana ne-Pesticide Esetshenziswa Kakhulu, Ishidi Leqiniso le-USRTK
Izindaba zeGlyphosate ezivela kuphenyo lwe-USRTK
Amaphepha eMonsanto: Imibhalo esemqoka nokuhlaziywa kanye namacala asenkantolo abandakanya i-Roundup
KaCarey Gillam IMonsanto Roundup neDicamba Trial Tracker - Ukuvuselelwa njalo ezindabeni zamacala
Ukubika nokuhlaziya ezilingweni zeMonsanto Roundup
Amaphepha eDicamba: Imibhalo esemqoka nokuhlaziywa kanye namacala asenkantolo afaka i-dicamba
Ingobo yomlando yezibulala-zinambuzane>